हेट, प्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म बटुलेर यी महिलाले गर्थिन यस्तो काम’ थाह पाउदा प्रहरी पर्यो चकित्!!! – News Nepali Dainik
हेट, प्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म बटुलेर यी महिलाले गर्थिन यस्तो काम’ थाह पाउदा प्रहरी पर्यो चकित्!!!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३०, २०७७ समय: १०:३१:२१
मानिसले पैसा कमाउन अनेकौ उपाय अपनाउने गरेका छन् । कसैका अनौठा शोख पनि हुन्छन् । जसले मानिसलाई अचम्म बनाउँछ । पैसा कमाउन एक जना महिलाले अपनाएको उपायले प्रहरीलाई पनि चकित् बनाएको छ । उनले केही ब्यक्तिको सहयोगमा प्रयोग भइसकेको क ण्ड म भेला पारेर पुन बेच्ने गरेकी थिइन् । दक्षिण पूर्वी एशियाली देश भियतनाममा एक महिलाले यस्तो काम गर्ने गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
Last Updated on: February 12th, 2021 at 10:31 am